﻿ स्मार्टफोनको ब्याट्री टिक्दैन ? यसो गर्नुहोस्
सोमबार ०९, बैशाख २०७६
अहिलेको समयमा प्रायः सबै मानिसका हात हातमा स्मार्टफोन हुन्छन् । धेरै स्मार्टफोन चलाउने मानिसहरुको गुनासो हुन्छ, निकै छिटो ब्याट्री सकिने । यस्तो समस्या धेरैले भोग्ने गरेका छन् ।
स्मार्टफोनमा ब्याट्रीको चार्ज छिटो सकिने समस्याका कारण विभिन्न हुन सक्दछन् । ब्याट्री बिग्रिनु वा स्मार्टफोनमा अरु कुनै प्राविधिक समस्या आउँदा पनि यस्तो हुन सक्दछ । र, कतिपय अवस्थामा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका केही आनीबानीका कारण पनि यस्तो हुन सक्दछ । त्यसैले ब्याट्रीको आयु बढाउनका लागि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले आफ्ना यस्ता बानी त्याग्नुहोस्ः
१. भाइब्रेसन मोडमा नराख्नेः रिंगटोनको आवाजको तुलनामा भाइब्रेट हुँदा फोनको उर्जा धेरै खपत हुन्छ । त्यसैले यदि आफ्नो स्मार्टफोनको ब्याट्री धेरै टिकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने फोनलाई भाइब्रेसन मोडमा नराख्नुहोस् ।
२. स्क्रिनको चहकिलोपना कम गर्नेः स्मार्टफोनको स्क्रिनले सबैभन्दा धेरै ब्याट्री खान्छ । स्क्रिन जति ठूलो तथा चमकदार हुन्छ र हाइ रिजोलुसनयुक्त हुन्छ उति नै धेरै ब्याट्री खपत हुन्छ । यदि तपाइँ फोनमा स्क्रिनको ब्राइटनेसका लागि अटो मोड छ भने त्यसको प्रयोग गर्नुहोस् र यदि छैन भने ब्राइटनेसलाई ५० प्रतिशतको आसपास राख्नुहोस् । यसबाट ब्याट्री कम खपत हुन्छ । खास आवश्यकताको बेला, जस्तै घाममा मोबाइल हेर्नुपर्दा चाहीँ ब्राइटनेस बढाउन सकिन्छ ।
३. लोकेसन सर्भिसन अफ गर्नेः स्मार्टफोनमा सदैव लोकेसन सर्भिस अन गर्दा ब्याट्रीको खपत बढी हुन्छ । त्यसैले आवश्यकता नपरेको बेला फोनको लोकेसन सर्भिस अफ गरिराख्नु पर्दछ ।
४. क्यामरा तथा भिडियो प्रयोग केहीबेर रोक्नेः यदि तपाइँको फोनमा ब्याट्री कम बँचेको छ भने त्यस समयका लागि तपाई मोबाइलको क्यामरा तथा भिडियोको प्रयोग कम गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाइँको ब्याट्रीको चार्ज केही समय बढी टिक्दछ ।
५. लाइभ वालपेपर हटाउनुहोस्ः फोनको स्क्रिनमा तैरिरहेको माछा वा अरु कुनै लाइभ वालपेपरको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने त्यसलाई हटाउनुहोस् । किनकि यस्तो चल वालपेपरले स्मार्टफोनको ब्याट्री धेरै खपत गर्दछ । यसको साटो गाढा रङको फोटोको वालपेपर राख्न सकिन्छ ।
६. ब्लुटुथ, वाइफाइतथा मोबाइल डाटाः आफ्नो स्मार्टफोनमा आवश्यकता बाहिरको समयमा ब्लुटुथ, वाइफाइ तथा मोबाइल डाटा अफ गर्नुहोस् । यदि सधै यी फिचर अन गर्ने बानी छ भने बानी फेर्नुहोस् । चाहिने बेला मात्र ब्लुटुथ, डाटा वा वाइफाइ अन गर्नुपर्दछ ।
७. अनावश्यक एपहरुबाट बच्नुहोस्ः अहिले एपस्टोरहरुमा असंख्य र अनेक खालका एपहरु छन् र धेरै निःशुल्क रहेका छन् । निःशुल्क पाइने एपहरु सोचविचार नगरिकनै सबै भटाभट डाउनलोड गर्नुपर्दछ भन्ने होइन । आफ्नो स्मार्टफोनमा केवल कामलाग्ने वा अत्यावश्यक एपहरु मात्र डाउनलोड गर्नुहोस् । प्रयोगमा नआउने खालका एपहरु आफ्नो स्मार्टफोनमा नराख्नुहोस् ।
गुगलले हटायो प्लेस्टोरबाट ८५ वटा एप्स
फेसबुकले ल्यायो नयाँ फिचर, गोपनियताको हिसाबले निकै फाइदाजनक !
अमेरिकाले हुवावेमाथि लगाएको प्रतिबन्ध ९० दिनका लागि स्थगित